भक्तपुरका सुनिलको दमदार प्रस्तुती : द भ्वाईस अफ नेपालका सबै निर्णायक दंग (हेर्नुस् के भने) — Bhaktapurpost.com
भक्तपुरका सुनिलको दमदार प्रस्तुती : द भ्वाईस अफ नेपालका सबै निर्णायक दंग (हेर्नुस् के भने)
निशा कुस्मा / भक्तपुर पोस्ट भक्तपुर, ९ असोज
भक्तपुर, ९ असोज
शंकर,शिव हे महेश बोलको राग अहिर भैरव जब सिङ्गिङ्ग रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’मा गुञ्जियो तब निर्णायकहरुले आफूलाई थाम्न सकेनन् । रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’का सबै चारै जना निर्णायकहरुलाई जादूमय स्वरले तान्यो र उनीहरु गायक तर्फ फर्किए ।
कुनै एक निर्णायकलाई मात्र पनि आफू तर्फ फर्काउन सके प्रतियोगी अर्को राउन्डमा प्रवेश गर्न पाउनेमा चारैजना निर्णायकहरुलाई आफू तर्फ फ़र्काउन सफल प्रतियोगी हुन् भक्तपुरका सुनिल लोहला श्रेष्ठ ।
सुनिलको जादूमय स्वरका कारण उनले चारैजना निर्णायकलाई आफू तर्फ फर्काउन सफल भए र भक्तपुरको दमदार उपस्थिति देखाए ।
को हुन् सुनिल
भ्वाइस् अफ नेपाल- सिजन टूका सहभागी सुनिल लोहला श्रेष्ठ कर्नाटक विश्वविद्यालयबाट संगीतमा स्नात्तकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेर नेपाल फर्केका हुन् । पुरानो घर भक्तपुरको खँलामा बताउने उनी हाल भने सिपाडोलमा बस्छन् ।
मध्यम वर्गको परिवारमा जन्मेका उनी प्लस टू सकेको लामो समय पछि भारत पसेका थिए । पढाईमा खासै रुचि नभए पनि सानैदेखि विद्यालयको कार्यक्रमहरुमा भने गीत गाईरहन्थे । उनी संगीत क्षेत्रमा जानुभन्दा अगाडि पाटनमा ढलौटको काममा व्यस्त भएका थिए ।
योग्यता एउटा भएपनि उनी अर्कै पेशामा गन्तव्य बिहिन भएर काम गरिरहेका थिए । तर गीतहरु गाउने काम भने छोडेनन् ।” त्यस बेला हामी गायक अनिल सिंहका गीतहरु गाउने गथ्यौं ।” भक्तपुर पोस्टसंग उनले बिगत सम्झीए । गायक सिंहको सफलताको कथाबाट उनलाई प्रेरणा मिलेको उनी बताउञ्छन । ”उहाँको कडा मिहेनत र व्यक्तिगत कथाबाट मैले पनि जीवनमा केही न केही त गर्न सक्छु भन्ने आभाष भयो ।” सुनिल सम्झनछन ।
त्यति मात्र होइन, जब उनी पाटनमा काम गर्दथे तब उनलाई साहुले स्वामी विकाशानन्दको ‘म्यानपावर’ पुस्तक पढ्न दिएका रहेछन । एक दिन काममा सुनिलले किताबमा भनेका कुराहरु सम्झे । पहिलो कुरा जुन काम गर्नुपर्छ त्यसको तिमी राजा हुनुपर्छ । उनले सोचे मैले अहिले गरेको काम त पैसाको लागि मात्र हो, आत्मसन्तुष्टि भने फिटिक्कै छैन ।
दोस्रो कुरा तिमी को हौ ? आफूलाई चिन ! भन्ने प्रश्न उठाएको सम्झे र सोचमा डुबे । सोच्दा सोच्दै आफू सानो छँदा कार्यक्रहरुमा गीत गाउँदै हिडेका दिनहरु उनलाई याद आयो । अन्तत: सुनिलको गन्तव्य निश्चित भयो र उनले निश्चय गरे संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने ।
त्यसपछि जमलमा रहेको डो.रे.मी. बाट उनले दुई वर्ष संगीत सिके । दुई वर्ष अभ्यास गर्दा उनको गला बिग्रियो र दुई वर्ष गलालाई आराम दिँदै पुन: पुरानै काम गर्न थाले । तर उनले आफ्नो लक्ष बिसाएका भने थिएनन केवल थाती राखेका थिए ।
त्यसपछि सन् २००९ मा उनी भारत गए । त्यसबेला उनको उमेर २४ वर्ष भैसकेको थियो । चौबीस वर्षको लक्क जवान उमेरमा उनी गायक बन्न भारत गए र संगीत अध्ययन गरेर उनी नेपाल फर्किए ।
नेपाल आउना साथ भ्वाइस अफ नेपालमा
भारतमा अध्ययन गरेर नेपाल आएको एक महिना सम्म पनि काम नपाए पछि उनले भ्वाईस् अफ नेपाल सिजन टूमा सहभागी बन्ने निर्णय लिए । तर, उनले आफ्नो योजना कसैलाई भनेनन् । भ्वाईस् अफ नेपालमा गए पनि हुन्थ्यो, किन नगएको होला भनेर सोध्ने साथीहरुलाई सरप्राइज दिंदै उनले प्रतियोगितामा भाग लिए र सबै निर्णायकलाई प्रभावित पार्दै शानदार शुरुवात गर्न सफल भएका छन् । यसले उनको जीवनको एउटा इच्छा पूरा भएको सुनिल बताउँछन् ।
सुनिल लोहला आफूलाई संगीतकार, गीतकार र गायकको रुपमा परिचित गराउँन चाहन्छन् । नयाँ कुरा सिक्ने र आफू जस्तै अन्य मित्रहरुसँग घुलमिल हुन यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म भएको उनको बुझाइ छ । त्यसका अतिरिक्त यहाँबाट सांगीतिक उडान भर्न मार्गप्रसस्त हुने उनले बिस्वास व्यक्त गरेका छन् ।
भारतमा संगीत सिक्न गएका उनले छ वर्ष सम्म पनि राम्ररी सिक्न सकेनन् । सुनिल भन्छन्, ‘गुरुहरुले मलाई मिस्टेकको ट्रेजर भन्नुहुन्थ्यो ।’ दश वर्षमा पछिल्लो चार वर्ष मात्र संगीत सिक्ने स्वर्ण युग नै बनेको उनले बताए ।
‘जीवनमा जुनसुकै विधामा सफल हुन सानै देखिको लगन हुनुपर्छ । जीवनको मध्य तिर आएर संगीतलाई अँगाल्दा निकै कठिनाई आईपर्ने उनी आफुनो अनुभव सुनाउँछन् ।
सुनिल लोहला हाल एभरेष्ट इङ्लिस स्कूलमा संगीतका प्रशिक्षकका रुपमा कार्यरत छन् भने संगीतग्राम गुरुकूल नेपाल सुरु गर्ने तयारीमा पनि जुटेका छन् ।
हौसला र साथ आवश्यक
सिङ्गिङ्ग रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’मार्फत श्रोता र दर्शक कमाउन उनलाई मौका मिलेको छ । उनी प्रतियोगिताको ब्लाइण्ड राउण्ड बाट छनौट भै वरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठको टीममा गएका छन् । चारैजना निर्णायक/कोचको भागमा १६-१६ जना प्रतियोगी परेका छन् । यिनीहरु मध्ये उत्कृष्ट प्रस्तुती गर्दै प्रत्येक राउण्डमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्ने आगामी दिन उनका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन । तर, उनी चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिंदै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने आत्मबिस्वासका साथ् अघि बढेका छन् र आफूलाई हौसला र साथ दिन भक्तपुर पोस्ट मार्फत यहाँहरु समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
सच्याइएको : विकाशानन्दको पुस्तक हुनुपर्नेमा विवेकानन्द भएकोले सच्याइएको छ । -सम्पादक
सुनिलको दमदार प्रस्तुती हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
हेर्नुस् निर्णायक फर्किएर के भने
भक्तपुर पोस्टको फेसबुक पेज लाइक गरी फेसबुकमै खबर प्राप्त गर्नुहोस् !
भक्तपुर पोस्ट – सूचना तपाइँको औंलामा
पेज लाइक गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्